पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिरेनन् ५ करोड कर, जरिवाना नै करोडभन्दा बढी::kamananews
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिरेनन् ५ करोड कर, जरिवाना नै करोडभन्दा बढी
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको झापाको दमक नगरपालिका–४ र ९ मा अवस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गरेको छ ।
२०६३ सालदेखि शाह नागरिक हैसियतमा फर्किएदेखि बगानले कर तिरेको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत कर तिर्न अटेर गरेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘धेरै पटक पत्र पठाइएको थियो, पूर्वराजा आएको बेला दमकमै सर्वदलीय संयन्त्रसहित कर तिर्न आग्रह गर्दा कर तिर्न अटेर गरियो,’ वित्त व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । १५ कित्ता जग्गामा ५ सय ७५ बिगाहा १७ कठ्ठा १४ धुर जग्गा देखिन्छ ।
सम्पत्ति करबापत ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ५ करोडभन्दा माथिको रकममा प्रतिहजार २ रुपैयाँ कर लगाउने व्यवस्था रहेको नगरपालिका कर शाखा प्रमुख टिकाराम दाहालले बताए ।
२०७३ जेठमा दमक आएका बेला दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहितको राजनीतिक दलले कर तिर्न दबाब दिएका थिए । शाहले तत्काल कर तिर्ने बताएपनि २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कर तिरेका छैनन् । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि अन्तर्गत बगानले ५ करोड २९ लाख ९९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि दमक नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अधिनमा रही लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर हिमालय महालक्ष्मीले शुरूदेखि नै तिरेको छैन । नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आमनागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजाले पनि तिर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तर्क गर्छन् । तर, अहिलेसम्म उठाउन भने सकेको अवस्था छैन ।
‘लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले भने, ‘हामीले पहल गर्दागर्दै पनि भएको छैन । यसअघि पनि धेरै पटक पहल भइसकेको छ ।’ बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने र कर तिर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नगरपालिकाको कर शाखा प्रमुख टीकाराम दाहालले गत वर्षको पुससम्म करीब ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर तिर्न बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप कर बढेको बताए । उनले हालसम्म १ करोड ३१ लाख ९९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ जरिवाना अन्तर्गतको रकम तिर्नुपर्ने तथ्यांकमा देखिएको जानकारी दिए । नियमित रुपमा कर बुझाएको अवस्थामा थप जरिवाना नलाग्ने उनले सुनाए । तर, लामो समयदेखि अटेर गर्दै आउँदाको परिणाम ठूलो मात्रामा कर तिर्न बाँकी रहेको हो ।
२०६२ सालमा जग्गाको नाममा रहेको मालपोतको अवस्थाको बारेमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट नगरपालिकाले विवरण मगाएको थियो । त्यो बेलासम्म मालपोत कार्यालयमा मालपोत तिरेको देखिएपनि त्यसयता एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएसँगै १ रुपैयाँ पनि तिरेको अवस्था नरहेको उनले बताए ।
दमक नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हो । तर, कृषियोग्य भनेर मालपोत कार्यालयबाट विवरण लिइएकाले कृषिलाई एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत नै राखेर करको विवरण तय गरिएको छ ।
शुरूमा नगरपालिकामा दर्ता गर्दा कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन रहेको थियो । त्यसपछि पछिल्लो समय कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ प्रालिको नाममा जग्गा रहेको छ । जग्गाधनी नै कम्पनी भएकाले त्यसको सञ्चालक नै पूर्व राजपरिवार भएको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘नगरपालिका पूर्वाग्राही भयो’
नगरपालिकाले कृषि उद्योग भएपनि अरु उद्योगजस्तै कर लगाएको दाबी बगान प्रशासनको छ । चिया बगानका महाप्रबन्धक शिवप्रसाद आचार्यले नगरपालिका पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भएका कारण कर समस्या भएको बताए ।
‘हामीले नियतवश कर नतिरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थामा गरिरहेको छैन ।’ उनले औद्योगिक कर लगाएको बताए । नगरपालिकाले पहिला लिँदै आएको मालपोत भएपनि नगरपालिकाले उद्योग कर लगाउँदा समस्या भएको बताए । तर, नयाँ मेयर सा’प आएपछि एउटा चिठी दिएको र त्योबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘१३ वर्ष पहिला वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ वार्षिक तिर्दै आएको थियो । त्यहीबेला वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बनाउने सहमति भएकोमा ठूला उद्योग सरह कर लगाएपछि विवाद शुरू भयो,’ आचार्यले भने ।
सम्पत्ति कर भनेर नेपालको चिया बगानले नतिरेको अवस्थामा आफ्नो कम्पनीले मात्र नतिर्ने भनेर नगरपालिकासँग भनिएको उनले लोकान्तरलाई बताए । उनले भने, ‘अरु चिया बगानले जति तिर्छन्, त्यही आधारमा हामी तिर्न तयार छौं । तर, एकै खालको नीति सबै बगानमा लागू हुनुपर्छ ।’
कर शाखा प्रमुख दाहालले कृषि उद्योगलाई सहुलियत रहेको दाबी गरे । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन अनुसार कर लगाएका हौं,’ दाहालले भने, ‘तर बगान प्रशासनले यकीन सम्पत्तिको लागत भने उपलब्ध गराएको छैन ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका काका हिमालयविक्रम शाहको नाममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा शिलान्यास गरेको चिया बगानको नाम पञ्चायत रहुन्जेल ‘हिमालय टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि’ थियो । ५ सय ७५ बिगाहा १७ कठ्ठा १४ धुर जमिनमा रहेको चिया बगानको नाम पञ्चायतको समाप्तिपछि हिमालय गुडरिक र हाल आएर हिमालय महालक्ष्मी चिया बगान राखिएको छ ।
सम्पत्ति कर तिर्न कैयौं पटक पत्राचार गर्दा चिया बगानले नटेरेपछि नगरपालिकाले २०६९ भदौ ८ गते मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्र लेखी हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको नाममा रहेको सबै जमिन किनबेचमा रोक्का गर्न भनेको थियो ।
सिन्धुलीको दूधौलीमा भोलि सार्वजनिक बिदा
२ मङ्सिर, सिन्धुली । हरिबोधनी एकादशी तथा तुलसी विवाहको दिन यही मङ्सिर ३ गते दूधौली नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उक्त नगरपालिकामा दनुवार समुदायको बाहुल्यता रहेको र सो समुदायले यस दिनलाई हरिबोधनी अर्थात बड्की...
ट्रकले च्यापिएर हेटौंडामा दुईजनाको मृत्यु
२ मंसिर, हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा-९ पशुपति नगरमा ट्रकले च्यापिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । बाराबाट मकै बोकेर आएको ना६ख ७०१७ नम्बरको ट्रक पल्टिदा मोटरसाइकल र अटो च्यापिएका थिए । सोही दुर्घटनामा घाइते भएका...
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको एजेण्डा चिकित्सा शिक्षा विधेयक !
२ मंसिर, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले मंसिर ९ गतेबाट दफावार छलफल सुरु गर्ने निर्णय...
२ मङ्सिर, सुर्खेत । लेकबेँसी नगरपालिका–६ बाघखोर सुर्खेतका किसान पूर्णप्रसाद शर्मा तरकारी बालीबाटै सन्तुष्ट छन् । ५६ वर्षीय शर्माले तरकारीखेतीमा हात हालेको आज २२ वर्ष भयो । यसमा उनलाई गर्व लागेको छ । विसं २०५३...
‘पञ्चायती’ मा युवतीमाथि बलत्कारको माग !
२ मंसिर, काठमाडौं । पञ्चायती (गाउँका भद्रभलाद्मीको सभा) मै एक युवतीलाई सार्वजनिक बलात्कार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसको विरोध गर्दा एक सांसद कुटिएका छन् । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका-६ मदनपुरमा शुक्रबार बसेको पञ्चायतीमा राष्ट्रियसभा सदस्य...
सीमा समस्या समाधानको माग गर्दै स्थानीय तह धाउँदै डडेल्धुराका महिला
२ मंसिर, डडेल्धुरा । सीमाको समस्या झेल्दै आएका स्थानीयले समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्दै स्थानीय तहमा धाउन थालेका छन् । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका सीमा क्षेत्रका महिलाहरु सामुहिक रुपमा सीमासँग जोडिएका आफ्ना समस्या समाधानको माग गर्दै...
‘यू-टर्न’ नलिनेहरु नेता नै होइनन्ः इमरान खान
२ मंसिर, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘यू-टर्न’ लिन नसक्ने नेता कहिल्यै सफल नहुने बताएका छन् । पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री खानले भने, ‘यू-टर्न नलिने कहिल्यै सफल नेता हुँदैन र जसले ‘यू-टर्न’ लिन जान्दैन...
लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार शुरु
२ मंसिर, रुपन्देही । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा पूर्वीय दर्शनको विविधता विषयमा छलफल गर्न शनिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार शुरु भएको छ । नेपाल र चीनका दुई विश्वविद्यालयको आयोजनामा एशियाली प्राकृतिक दर्शनको विविधिकरण विषय सेमिनार शुरु भएको हो...
रुकुम पश्चिममा गोली र खुकुरी प्रहार गरी श्रीमती र छोराको हत्या
२ मंसिर, रुकुम । रुकुम पश्चिममा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमती र छोराको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका–१ बल्लेजुराका ४९ वर्षीय सत्तबहादुर बुढाले श्रीमती ४२ वर्षीया इन्द्रकला बुढा र छोरा ११ वर्षीय स्वयमप्रकाश बुढाको...
बदलियो किलोग्रामको परिभाषा, हाम्रो जीवनमा के असर गर्छ ?
२ मंसिर, काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले किलोग्राम (केजी)को परिभाषा परिवर्तन गरेका छन् । नयाँ परिभाषालाई ५० भन्दा बढी देशले सर्वसम्मतीले अनुमति दिइसकेका छन् । पहिले यसलाई प्लाटिनमबाट बनेको एक सिलको वजनसँग परिभाषित गरिन्थ्यो जसलाई ‘ली ग्रान्ड...
२ मङ्सिर, सिन्धुली । हरिबोधनी एकादशी तथा तुलसी विवाहको दिन यही मङ्सिर ३ गते दूधौली नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उक्त नगरपालिकामा दनुवार समुदायको
२ मंसिर, हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा-९ पशुपति नगरमा ट्रकले च्यापिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । बाराबाट मकै बोकेर आएको ना६ख ७०१७ नम्बरको ट्रक पल्टिदा
२ मंसिर, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आइतबार
२ मङ्सिर, सुर्खेत । लेकबेँसी नगरपालिका–६ बाघखोर सुर्खेतका किसान पूर्णप्रसाद शर्मा तरकारी बालीबाटै सन्तुष्ट छन् । ५६ वर्षीय शर्माले तरकारीखेतीमा हात हालेको आज २२
२ मंसिर, काठमाडौं । पञ्चायती (गाउँका भद्रभलाद्मीको सभा) मै एक युवतीलाई सार्वजनिक बलात्कार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसको विरोध गर्दा एक सांसद कुटिएका